October 14, 2020 October 14, 2020 बुटवल न्युज अपडेटLeaveaComment on कोभिड-१९ को सावधानीसहित मिस नेपाल एसईई २०२० सम्पन्न, रेजिनाले जितिन् उपाधि
सम्पदा गार्डेन रिसोर्ट, काठमाडौमा अभ्यानी प्रोडक्सनको आयोजना भएको ‘मिस नेपाल एसईई २०२०’ को उपाधि रेजिना लिम्बूले जितेकी छिन्। यसैगरी प्रतियोगीतामा फस्ट रनरअप सिल्भिया केसी बनिन् र सेकेन्ड रनरअपको उपाधि सुबिका पौडेलले हात पारिन्। कोभिड-१९ को बीचमा विभिन्न सुरक्षा सावधानी अपनाउँदै १० दिने रेसिडेन्सियल कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। प्रोभिन्सतर्फको उपाधिभने प्रोभिन्स ३ मा महिमा महतो, प्रेभिन्स […]
सर्ट मुभी एक लभरको फस्टलुक पोस्टर सार्वजनिक गरिएको छ । द सेलिव्रेटी टाइम्सको ब्यानरमा निर्माण गरिएको चलचित्रको आज सामाजिक संजालमार्फत दुईवटा तस्विर सार्वजनिक गरिएको हो । चलचित्रलाई सि.ए. दुर्गाप्रसाद ज्ञवालीले निर्माण गरेका हुन् । समसामयिक प्रेम कथामा आधारित चलचित्रको दुई पोस्टरमध्ये एउटा पोस्टरमा प्रेमिल जोडीको प्रेम भाव प्रस्तुत गराइएको छ भने अर्को पोस्टरमा युवाको भिन्नै […]
विश्व कोरोना कहरले आक्रान्त बनिरहेको बेला लोक संगीत क्षेत्र पनि अछुतो बन्न सकिरहेको छैन तथापि कोरोना कहरकै बिच पनि सर्जकहरुले सिर्जना गरिरहेकै छन् । कतिपय नव कलाकारहरुका लागि त यो कोरोनाका कारण गरिएको लकडाउन फापेको हो कि भन्न सकिन्छ । यसै बिच बिहानी फिल्मसले नयाँ लोक गीत ‘कानुन’ सार्वजनिक गरेको छ । सार्बजनिक गरिएको गीतमा […]
October 10, 2020 October 10, 2020 बुटवल न्युज अपडेटLeaveaComment on रवि ओड र अस्मिता अधिकारीको आवाजमा ‘टालाटुली बाटुली’
गायक रवि ओड र गायिका अस्मिता अधिकारीको आवाजमा ‘टालाटुली बाटुली’ बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । शुक्रवार गीतको म्युजिक भिडियो सहित युट्युबमा सार्वजनिक गरिएको हो । डीबी लामाको सङ्गीत रहेको गीतकी रचनाकार हुन् दुर्गा खनाल घिमिरे । डिजे मेवहाँङले रेकर्ड गरेको गीत पुष्कर सुनवारले एरेन्ज गरेका हुन् । सार्वजनिक गीतको भिडियोमा कलाकार प्रियना आचार्य, गायक […]
October 5, 2020 October 5, 2020 बुटवल न्युज अपडेटLeaveaComment on प्रदर्शन मिति तय गर्दै ‘लक्ष्मीपूजा’को टिजर सार्वजनिक
आगामी कार्तिक ७ गते फूलपातीको दिन रिलिजको घोषणा गर्दै फिल्म ‘लक्ष्मीपूजा’को टिजर सार्वजनिक भएको छ । समिर मियाँको निर्देशन रहेको फिल्ममा शोभित बस्नेत निर्माता छन् । फिल्ममा जयकिशन बस्नेत, जाहान्वी बस्नेत, अस्मिता जुुरेली, नीर शाहको अभिनय रहेको छ । फिल्ममा सलोन बस्नेत र रियाशा दाहाल विशेष भूमिकामा देखिँदैछन् । फिल्ममा जाहन्वी दोहोरो भूमिकामा देखिँदैछिन् । […]
October 1, 2020 October 1, 2020 बुटवल न्युज अपडेटLeaveaComment on प्रमोद खरेलको ‘छाती चिरेर’ ट्रेन्डिङमा
नेपाली सुगम संगीतमा फरक स्थान बनाएका गायक प्रमोद खरेलको नयाँ सांगीतिक फिल्म शैलीको गीत ‘छाती चिरेर’ सार्वजनिक भएको छ । अघिल्ला गीतहरुभन्दा विल्कुल फरक रहको यो गीत सार्वजनिक भएको तेस्रो दिनसम्म युट्युबमा झन्डै चार लाख भ्युज पुगेको छ भने गीत ट्रेन्डिङमा रहेको छ । भिडियोको क्लाइमेक्सले दर्शकलाई सरप्राइजमा राखेको छ । हरि लम्सालको संगीत, प्रमोदकै […]
स्रष्टा स्व. मनुजबाबु मिश्रका निबन्धहरूको सङ्ग्रह ‘एकलानुभूति’ मंगलबार सार्वजनिक भएको छ । मिश्र झन्डै ३० वर्ष काठमाडौंको बौद्ध महाङ्कालस्थित आफ्नो कलाकुटीमा एकान्तवास बसेका थिए । उनका यसअघि प्रकाशित ६ वटा निबन्धसंग्रहबाट साहित्यकार अमर न्यौपानेले छानेका निबन्ध ‘एकलानुभूति’मा सङ्गृहीत छन् । मिश्रका विभिन्न निबन्धसङ्ग्रहका फरकफरक अनुहारका रूपमा यो पुस्तक रहेको न्यौपानेले बताए । ‘एउटै मनुजबाबु मिश्रमा […]
लकडाउनका कारण रोकिएको चलचित्र ‘परदेशी-२’को छायाँकन शुरु गर्ने तयारी गरिएको छ । एक सातापछि छायाँकन सुरु गर्ने तयारीका साथ वर्कशप सुरु गरिएको चलचित्रका निर्देशक एवं बरिष्ठ संगीतकार नारायण रायमाझीले ईरानीमहललाई जानकारी दिनुभयो । मंगलबार ईरानीमहलसंग कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘आजदेखि वर्कशप शुरु गरेका छौं । सरकारले अनुमति दिए १७/१८ गतेदेखि छायाँकनमा जाने गरी तयारी थालेका […]
कोरोनाका कारण छायांकन रोकिएका दुई प्रतिक्षीत फिल्म ‘परदेशी २’ र ‘ए मेरो हजुर ४’ को छायांकन सुरु गर्ने तयारी थालिएको छ । यही शुक्रवारबाट निर्माता सुनिल कुमार थापाले अनमोल केसी स्टारर फिल्म ‘ए मेरो हजुर ४’ को बाँकी छायांकन सुरु गर्दैछन् । त्यस्तै, असोज दोस्रो साताबाट छायांकन थाल्ने गरी ‘परदेशी २’ टिमले मंगलवारबाट वर्कसप सुरु […]
September 29, 2020 September 29, 2020 बुटवल न्युज अपडेटLeaveaComment on ए मेरो हजुर–४ मा दुर्गेश थापा
गायक दुर्गेश थापाले राम्रो भूमिका पाएमा चलचित्रमा नायकका रूपमा प्रस्तुत हुने बताएका थिए । यसै क्रममा उनी नयाँ चलचित्र ‘ए मेरो हजुर–४’ मा गायक र नायक दुवै रूपमा अनुबन्धित भएका छन् । यो चलचित्रमा अनमोल केसी र सुहाना थापाको मुख्य भूमिका रहेको छ । गत फागुनमा २५ प्रतिशत छायांकन गरिएको यो फिल्मको बाँकी छायांकन चाँडै […]
चाडपर्वहरुको आगमनसंगै बुटवलमा बजार अनुगमन तीब्र
September 30, 2021 September 30, 2021 बुटवल न्युज अपडेट